अर्थ/बजार Archives - Page3of 201 - Sawal Nepal
अनलाइन बैंकिङको प्रयोग गर्नुअगाडि यस्ता कुराको जानकारी राख्नुहोस
काठमाडौं । कोभिड-१९ को दोस्रो लहर फैलिएसँगै सरकारले देशका अधिकांश ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेकाे छ । यस्तो अवस्थामा घरमै बस्नुभन्दा अर्को सुरक्षित विकल्प छैन । निषेधाज्ञाकै कारण अधिकांश मानिसहरू अनलाइनबाटै बैंकिङ काराेबार र भुक्तानी कार्य गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवाप्रदायकले पनि प्रयोगकर्तालाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नै कारोबार गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छन्
नेप्से ५३ अङ्कले बढ्यो, ३६ वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि
काठमाण्डाै – शेयर बजारमा उछाल आउने क्रम मङ्गलवार पनि रोकिएको छैन । शेयर बजार परिसूचक नेप्से ५३ दशमलव ४४ अङ्कले बढेर २९ सय ६० दशमलव १४ विन्दुमा पुगेको छ । आज होटल, माइक्रोफाइनान्स र लगानीबाहेक सबै समूहको शेयर बढेको छ । विकास बैंक समूहको शेयर तीन सय ९८ अङ्कले, फाइनान्सको एक सय ८५ अङ्कले, बैंकिङ
गत सोमबार प्रतितोला ३०० रुपैयाँले घटेको सुनको मूल्य मंगलबार पुनः बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला ३०० रुपैयाँले बढेर गत आइतबारकै मूल्य ९४ हजार १०० रुपैयाँमा पुगेको हो । महासंघका अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य समेत प्रतितोला ३०० रुपैयाँले बढेर ९३ हजार ६०० रुपैयाँ पुगेको छ । तर, यता चाँदीको
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋणपत्र आजबाट बिक्री खुला हुँदै
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले मंगलबार (आज) देखि ८.५ प्रतिशत आरबीबीएल डिबेन्चर, २०८३ नामको ऋणपत्र बिक्री खुला गर्दैछ। बैंकले ६ वर्ष अवधि भएको वार्षिक ८.५० प्रतिशत ब्याजदर भएको कुल २ अर्ब ५० करोड रुपैंया (२५ लाख कित्ता) मूल्य बराबरको ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो । यस ऋणपत्रको ब्याज अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी गरिनेछ । ८.५ प्रतिशत आरबीबीएल डिबेन्चर,
मंगलवार नेपाली बजारमा अमेरिकन डलरको खरिद दर १ सय १६ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्री दर १ सय १६ रुपैयाँ ७९ पैसा कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलवारको लागि तय गरेको विदेशी मुद्रा सटही दरअनुसार युरोपियन युरोको खरिद दर प्रति युरो १ सय ४१ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रि दर प्रति युरो १
सोमबार सुन र चाँदी दुबैको भाउ घट्यो, हेर्नुहोस कति पुग्यो ?
सोमबार सुन र चाँदी दुबैको भाउ घटेको छ। गत आइतबार केहि बढेको सुनको भाउ सोमबार तोलामा ३०० रुपैयाँले घटेको छ भने चाँदीको पनि तोलामा ५ रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाला सुन प्रतितोला ९३ हजार ८०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला ९३ हजार ३०० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। अघिल्लो दिन
फेरि महंगिन थाल्यो सुन : प्रतितोला ७ सय रुपैयाँले बढ्यो, चाँदीको कति ?
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन सुनचाँदीको मूल्य उकालो लागेको छ । आइतबार नेपाली बजारमा छापावाला सुनको मूल्य तोलामा ७ सय रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला ९४ हजार १ सय रुपैयाँमा खरिदबिक्री हुनेछ । अघिल्लो दिन अर्थात शुक्रबार तोलाको ९३ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो
नेपाल आयल निगमले शनिबार राति १२ बजेपछि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल तथा हवाइ इन्धन (आन्तरिक उडान) को मूल्यमा २ रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । नयाँ मूल्य अनुसार अब पेट्रोलको मूल्य १२५ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको १०८ रुपैयाँ र हवाई इन्धनको ८० रुपैयाँ पर्नेछ । पछिल्लो पटक जेठ २ गते मूल्य बृद्धि गरी पेट्रोलको
उत्पादकले भान्सामा प्रयोग हुने तेलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेको विषयलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले सूक्ष्म अध्ययन थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको कच्चा पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालमा समेत चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्रै अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएपछि उद्योगसँग कागजात माग गरेर अध्ययन थालिएको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षणहित
एकैदिन ह्वात्तै घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, प्रतितोला कति सस्तियो ?
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन (जेठ २१ गते) सुनचाँदीको मूल्य ह्वात्तै घटेको छ । नेपाल बजारमा आज छापावाला सुनको मूल्यमा गिरावट आएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज एकैदिन सुनको मूल्य तोलामा १५ सय रुपैयाँले घटेको हो । शुक्रबार घटेको सुनको भाउ प्रतितोला ९३ हजार ४ सय रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको